Home News Dekadda Dooraale oo Lagu Wareejiyay Shirkada Laga Leeyahay Singapore
Dekadda Dooraale oo Lagu Wareejiyay Shirkada Laga Leeyahay Singapore
Dowladda Jabuuti ayaa heshiis maamulka Dekadda Dooraale ay la gaartay sharikadda maamusha Dekadaha oo laga leeyahay Dalka Singapore.
Sharikaddan oo lagu magacaabo PIL, waxaa ay Jabuuti kula heshiisay kordhinta maareynta Badeecadaha saran konteenarrada iyo sare u qaadidda dakhliga Dekadda.
Maamulka Dekadaha Dowladda Jabuuti oo aan faah faahin dheeraad ah ka bixin heshiiskan ayaa sheegay in heshiiskan uu muhiimad siinayo dekadaha Jabuuti gaar ahaan dekadda Dooraale oo qeybta maamulka Konteenarrada Terminalka la ballaarinayo si loogu kordhiyo masaafo qaadi karta Kunteenarro dheeraad ah.
Dekadda Dooraale waxaa hadda sanadkiiba mara ama laga dejiyaa in ka badan 1.6Milyan oo Kunteenar,iyada oo uu hadda qorshaha yahay in intaas laga ballaariyo.
Dowladda Jabuuti ayaa dhawaan dekadda Dooraale ka ceyrisay Sharikadda DPWorld ee Dalka Imaaraadka,iyada oo dowladda Imaaraadkuna ay dacwad ku furtay Jabuuti iyada oo ka dacweysay Dalka Ingiriiska gaar ahaan Magaalada London.
Sharikadda Dekada PIL ee Singapore waxaa ay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn Qaaradda Aasiya waxaana ay Sharikadaha dekadaha maamula ee Caalamka ugu jirtaa kaalinta 11aad.